Tsy nisy fahaverezana entana tao an-trano raha ny fahitana azy na dia mody nakorontana aza ny trano, hoy ny lehiben’ny Fokontany. Tsy voakasika ilay zazakely zanany.
Manambady, manan-janaka, ary mitondra vohoka efa ho 3 volana ity vehivavy nisy namono ity.
Iray tokontany amin'ny rafozany ny tranon'izy mivady kely saingy samy tany amin'ny asa fivelomany avy ny rehetra ka ilay vehivavy sy ny zanany ihany no tao an-trano io atoandro nisian'ny famonoana azy io. Efa eo ampelatanan'ny polisim-pirenena moa ny raharaha amin'izao fotoana.